Xaalad maskaxiyan oo la soo deristay bukaanada la dhigay isbit... | Universal Somali TV
Waxaa laga deyrinayaa xaaladda goobaha caafimaadka ee ku yaala Magaalada Mekelle, xilli bukaanada la dhigay la sheegay in ay u badan yihiin dad ay la soo deristay xaalad maskaxiyan ah.
Hay'adaha caalamiga ayaa sheegaya in dawo la'aan ay ka jirto magaaladaasi, oo Sabtidii ay la wareegeen Ciidamada Federaalka.
Shaqaalaha Caafimaadka ee Bisha Cas ayaa dhaawacyada ka soo uruuriyay magaaladaasi, iyagoona geeyay isbitaalka weyn magaalada ee Ayder.
Hay'adda ICRC ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ay shalay u suurtagashay inay kormeeraan isbitaalka Ayder, isla-markaana ay ku soo arkayn wax ay la fajaceen.
"Kooxdeena waxaa shalay u suurtagashay inay booqdaan isbitaalka guud ee Mekelle, waxayna la fajaceen tirada dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen dagaalada. Waxay qiyaasayaan in boqolkiiba sideetan (80%) dadka isbitaalka joogga ay yihiin kuwo ay soo gaareen dhibaato maskaxeed." Ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay ICRC.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri "Sidoo kale isbitaalada waxaa aad ugu yar waxyaabaha aasaasiga ah, sida xanuun baabi'iyaha iyo cinjirka gacmaha la gishto, taasi oo adkeynaysa in lala tacaalo dadka dhaawaca ah ee ku soo qulqulaya isbitaalka. Isla isbitaalkaasi maleh boorsooyinka lagu rido meydadka, waana midaasi tan walaaca inagu haysa iminka."
Ciidamada Militariga Itoobiya ayaa maalin ka hor soo geba-gabeeyay gulufkii ballaarnaa ee horaantii bishan lagu qaaday Gobolka Tigreyga, si gacanta loogu soo dhigo Madaxdii Xisbiga TPLF, maxkamadna loo horkeeno.
Kan-xigaTigreyga oo sheegay in la sii daayay ...
Kan-horeItoobiya oo dalkeeda ka ceyrisay dibl...
56,984,130 unique visits